Cabdiraxiin H Galayr | Laashin iyo Hal-abuur | Page 2
ABUL ACLA AL Mawduudi : AFARTA ERAYBIXINOOD EE QURAANKA
ABUL ACLA AL Mawduudi : AFARTA ERAYBIXINOOD EE QURAANKA ABUL ACLAA AL-Mawduudi (1903-1979) Waa fikaraaga muslimiinta ee qarniga labaatanaad kuwooda ugu saamaynta badan, waa hoggaamiyihii xarakaatka islaamdoonka ee qaarad-yaraha Hindiya, ...
Aduun baa hooyadeed ah!!Q2aad. W/Q Yaasiin Xasan Muuse..
Cabdiraxiin H Galayr - January 30, 2022 0
Aduun baa hooyadeed ah!!Q2aad. W/Q Yaasiin Xasan Muuse.. Maalmaha shaqada aan aado waxa aan geeyaa meelaha ciyaalka lagu hayo (Crèche) oo bishii lacag layska qaado. Laakiin wali culayskii iyo cidhiidhigi kama...
Il iyo Baal Q1AAD W/Q: Shaafici Maxamed Waxaad ahayd addoomada Alle abuuray midda ugu garaadka badan, marka loo eego aynigaaga. Firfircoonida iyo fool furnaanta ayaad la dhalatay lana barbaartay. Sahra...
Tuur, dhaqan qoraalka xun! W/Q Maxamed Haybe Axmed
Cabdiraxiin H Galayr - January 19, 2022 0
Tuur dhaqan qoraalka xun! Waxaa curtay sannad cusub. Waxaa galbaday sannadkii hore. Sidaa awgeed, wixii qaldamay gugii hore, maanta ma miyaad ku celin? Aan kuu saafo hadalkee, waxaa jira dabeecado...
Maansada Damaq W/T Cabdinaasir Maxamed Cali
Maansadan Damaq waxa ay ka hadlaysaa dhibaatooyinka lixaadka leh ee dalkeenna ka jira waxa laga dhaxlay iyo dagaallada iyo dirirta sokeeye sida ay u saameeyeen nolosha ubad badan oo...
Mar baan Masaajidkaa ka xannaaqi gaadhey!
Cabdiraxiin H Galayr - January 17, 2022 0
Mar baan Masaajidkaa ka xannaaqi gaadhey! Waa odey waayeela. Wuu warramayaa. Wuxuu yidhi: waxaa aan ahey nin muruq-maala. Waxa aan ka shaqeeyaa dhismaha. Waxa aan leeyahay toddoba carruura; Illaahay baa...
Aduumbaa hooyadeed ah!Qaybti 1aad W/Q: Yaasiin Xasan Muuse
Aduumbaa Hooyadeed Ah! Aduumbaa hooyadeed ah Qaybti 1aad Wajigeeda cadho ayaa ka muuqatay hadalkuna waxaad moodaa inuu yara dhibaayo, labba qof oo rukun ah oo ka horreeyay intay soo dhaaftay ayay...
Cabdiraxiin H Galayr - January 9, 2022 0
Indhaceel Daamey Raage iyo Weerarkii Talyaanigii Buuloburte, Maarso 27, 1916. Qeybta 2-aad: Weerarka kaddib maxaa dhacay? Xogta qoraalkan waxa aan ka soo guuriyay warbixin uu Abriil 18, 1916, Muqdisho ka...
Ka daa ha taaban nabarka caashaqa Qaybtii 3aad W/Q: Yaasiin Xasan Muuse
Cabdiraxiin H Galayr - January 6, 2022 0
Ka daa ha taaban nabarka caashaqa Qaybtii 3aad Waxaa si kadisa labadayda dhinac u soo fadhiistay Shankaroon Axmed sagal iyo Sahro Siyaad oo labadooduba ka mid ahaa hobaladdii dalkeena caanka...
Sidee loo qoraa sheeko xiiso leh? W/Q: Maxamed Haybe Axmed.
Cabdiraxiin H Galayr - January 4, 2022 0
Sidee loo qoraa sheeko xiiso leh? Marka hore Illaahay baa mahad leh, kaasi oo i abuurey, iguna galladey nimcadda qallinka. Waxaa la sheegaa maanta, iney tahay qarnigii sheeko qorista. waxaa...
123...176Page 2 of 176